Kodzero-dzevanhu, 08 Kukadzi 2019
Chishanu 8 Kukadzi 2019
VeChidiki muZanu-PF Vanoti Havachadi Kutungamirwa naVaTogarepi
Vamwe vechidiki veZanu-PF vanoti havachadi kutungamirwa naVapupurai Togarepi nevamwe vanosanganisa mutevedzeri wavo VaLewis Matutu, VaTendai Chirau, VaAdmire Mahachi uye Muzvare Mercy Mugomo.
VaMnangagwa Votsvaga Rutsigiro kuAU neSADC Apo Britain Yoronga Kuvatemera Zvirango Zvakasimba
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakawanda vanoti mutungamiri wenyika VaEmmerson VaMnangagwa vave kuita chipata pata kuyedza kuzvichenura pamberi pemusangano wakakosha zvikuru weAfrican Union uri kuitwa svondo rinouya kubva musi wa10 kusvika 11 Kukadzi.
Mauto Anoti Agadzirira Kudzokera kuMakamba Avo Sezvo Apedza Basa
Mumwe mukuru wemauto Major-General Douglas Nyikayaramba vanoti mauto akwanisa kuunza runyararo mushure mekuratidzira nekudaro vagadzirira kudzokera kumabaraki avo kana mapurisa ati haachadi rubatsiro.
Vamwe Vofarira Mashoko aVaTrump Aikurudzira Runyararo neKubatana
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kufara nemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, ayo vakataura pahurongwa hweState of The Union neChipiri manheru.
VaMnangagwa Voita Hurukuro neMamwe Mapato Anopikisa
Nhasi mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano kustate house nemamwe mapato anopikisa akakwikwidza musarudzo yegore rapera
Varairidzi Voenderera Mberi neKuramwa Mabasa
Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vakateerera kurudziro yekuramwa mabasa yakaitwa nemasangano anovamiririra.
Sachigaro weSADC VaGeingob vekuNamibia Voramba Kutaura neNyaya yeZimbabwe
Mutungamiri wenyika yeNamibia varizve sachigaro weSADC VaHage Geingob havasati vataura nezvemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kunyangwe hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu uye masangano anomiririra vashandi munyika dzakasiyana siyana siyana.